Nordea oo xaruntiisa guud u wareejinaya dalka Finland - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maaraayaha guud ee bangiga Nordeas Casper von Koskull. Sawirkii : Jonas Ekströmer/TT
Nordea oo xaruntiisa guud u wareejinaya dalka Finland
Bangiga Nordea oo xaruntiisa guud u wareejinaya dalka Finland
La daabacay torsdag 7 september 2017 kl 10.23
Bangiga Nordea oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalkaan Sweden ayaa xaruntiisa guud u wareejinaya dalka Finland.
Hogaanka sare ee bangiga Nordea ayaa maanta go’aankaas gaarey, waxayna talaabadaas ay qaadeen ku soo bandhigeen shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Helsinfors ee caasumadda dalka Finland.
Maareeyaha guud ee bangigaas Gasper Von Koskul ayaa isagoo arrinkaas ka hadlaya wuxuu yiri:
- Afar suuq ayaan ka hawlgalnaa, suuqyadaasna annaga ayaa hogaanka u heyna, waxaanu sanooyinkii danbe qaadney talaabooyin baaxad leh si bangigayagu uu u noqdo bangi waxtar leh, ayuu yiri Maareeyaha guud ee bangiga Nordea Gasper Von Koskul.
Sababta ugu weyn oo go’aankaan ka danbeysa ayaa ah maadaama dalka Finland uu xubin ka yahay bangiga ay ku midoobeen dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub taas oo bangiga Nordea u sahleysa in uu ka mid noqdo bangiyada hoos yimaada bangiga midowga Yurub ay ku midoobeen.
Gasper Von Koskul iyo mar kale:
-Waxyaalaha aanu ka fakarney ayaa waxaa ka mid ahaa sidii aanu ula jaanqaadi laheyn sharciyo si xawli ah isu badbadalaya iyo sidoo kale meeshii bangiga Nordea xarun guud u noqon laheyd sidaas ayeyna magaalada Helsinfors xarun ugu noqotey xafiiska guud ee bangigayaga, ayuu yiri Maareeyaha guud ee bangiga Nordea Gasper Von Koskul.
Sören Granath oo idaacadda Sweden uga soo warama dhanka dhaqaalaha ayaa isagoo arrinkaan ka faaloonaya wuxuu yiri sidan soo socota:
-Bangiga Nordea wuxuu rabaa in uu la jaanqaado sharciyada ay ku dhaqmaan bangiyada midowga Yurub, waxaana jira dad aaminsan in bangigaani balanfuryo sameeyey maadaama sanooyinkii sagaashameeyadii bangigaas lagu badbaadiyey lacag laga qaadey canshuurbixiyayaasha dalkaan, ayuu yir wariye Sören Granath.
Qaar badan oo ka mid ah ururada shaqaalaha ayaa raba in ay joojiyaan wadashaqeyntii ay bangiga Nordea la lahaayeen iyadoo taas ku muujinaya sida ay u diidan yihiin in xarunta bangigaas loo wareejiyo dalka Finland.
Ururada shaqaalaha ee talaabada bangigaasi qaadey ka hor yimid ayaa waxaa ka mid ah Ururka shaqaalaha degmooyinka dalkaan Sweden iyo waliba ururka shaqaalaha gaadiidka.
Tommy Wreeth oo ah madaxa ururka shaqaalaha gaadiidka ayaa isagoo arrinkaan ka hadlaya wuxuu yiri:
- Aad iyo aad ayaan arrinkaas uga xumahay , waxaanuna arrinkaas horgeyn doonaa maamulka guud ee urur weynaha shaqaalaha ee LO si looga hadlo in hantida ururka shaqaalaha bangiga Nordea u taalaa ay bangigaas ku sii nagaato iyo in kale, ayuu yiri Tommy Wreeth oo ah madaxa ururka shaqaalaha gaadiidka.
Tommy Wreeth ayaa intaas ku darey in bil kasta ururka shaqaalaha gaadiidku uu bangigaas Nordea marsiiyo lacago qiyaastii u dhexeeya 19 ilaa iyo 21 miljaarder oo karoon.